+5 nke obodo mara mma na Huelva | Akụkọ njem
Louis Martinez | | Nduzi, Huelva
na obodo kacha mara mma na Huelva ha na -enye gị ụlọ ọcha pụrụ iche, ihe ncheta, osimiri mara mma na ihe ịtụnanya dị ka Doñana National Park (ebe a ka anyị hapụrụ gị akụkọ gbasara ebe a). Mana na -enyekwa ebe obibi ebe ị ga -ahụ onwe gị n'ụlọ.
Ọzọkwa, enwere akụkụ ọzọ nke ógbè ahụ amachaghị maka njem nlegharị anya nke gụnyere obere obodo ndị dị na ndagwurugwu nke Oke ugwu nke Cumbres Mayores ma ọ bụ Aracena. Anyị ga -ekwukwa maka ha, mana, karịa, anyị ga -egosi gị njem nlegharị anya n'obodo kacha mara mma na Huelva nke ga -enyere gị aka ịmata nke ọma ihe ịtụnanya dị na mpaghara Spain a.
1 Site na Ayamonte ruo Cortegana
1.2 Osisi oke ala
1.3 Gaa n'ugwu
1.4 Niebla, obodo ọzọ mara mma na Huelva
1.6 Cortegana, ka anyị mechaa njem nlegharị anya anyị na Huelva
Site na Ayamonte ruo Cortegana
Anyị ga -amalite njem anyị na obodo mara mma nke Huelva na mpaghara oke osimiri dịka Ayamonte wee kwaga n'ime ime ógbè ahụ. N'ụzọ dị otu a, anyị ga -egosi gị ohere niile ọmarịcha ala a na -enye gị.
Ọgbakọ obodo Ayamonte
Emi odude ke inua Osimiri Guadiana, na ụkwụ nke Isla Cristina na -agba mmiri na ókè ya na Portugal, obodo Huelva a bụ iwu. N'obodo ime obodo ya ị ga -ahụ ndị na -ewu ewu Osimiri Isla Canela n'akụkụ Punta del Moral.
Mana, na -esote mpaghara bara uru maka gburugburu ebe obibi, Ayamonte nwere nnukwu ihe nketa. N'ihe gbasara okpukperechi, anyị na -adụ gị ọdụ ka ị gaa ụka Nuestra Señora de las Angustias na San Francisco, ma na narị afọ nke XNUMX na nke pụrụ iche maka akwa mkpuchi mkpuchi Mudejar.
Ị ga -ahụkwa ụlọ nsọ El Salvador, nke dị n'ime ya bụ ebe ịchụàjà Churrigueresque na ọtụtụ tebụl eserese Flemish. Ndị ụka Las Mercedes, Mercedario na Hermanas de la Cruz, ụlọ ụka San Antonio, del Socorro na Nuestra Señora del Carmen na ihe ncheta dị oke ọnụ na Virgen de las Angustias emechara ihe nketa nke Ayamonte.
Banyere ihe owuwu ụlọ, ị nwere ọmarịcha ụlọ ụlọ obodo ma ọ bụ Ụlọ Marchena, nke na -emepụta ụdị ụlọ ndị India; ili ozu ndị Rom nke Punta del Moral; obí nke Marquis nke Ayamonte ma ọ bụ Casa Grande, malitere na narị afọ nke iri na asaa.
N'ikpeazụ, anyị na -adụ gị ọdụ ka ị hụ Bulwark nke nhụjuanya, nke ọ bụ naanị kwaaji nke mgbidi ka fọdụrụ; ụlọ elu Canela nke owu na -ama na ọmarịcha Guadiana International Bridge, nke na -ekewa Ayamonte na Castro Marim, na Portugal.
Ogige dị na Palos de la Frontera
Anyị na -ewetara gị obere obodo a ugbu a ọ bụghị naanị n'ihi na ọ bụ n'etiti obodo mara mma na Huelva, kamakwa n'ihi nnukwu uru akụkọ ihe mere eme ya. Dị ka ị maara nke ọma, ọ si n'ọdụ ụgbọ mmiri ya pụọ Christopher Columbus na njem nke dugara ya ịchọpụta America.
Ihe ndị a niile emeela ka Palos pụta n'ụzọ njem nka nke nka Ebe Columbian. N'ime obodo Huelva ị nwere ike ịga leta Ebe obibi ndị mọnk La Rabida, nke na-apụtaghị naanị maka ụlọ ụka Gothic-Mudejar ya, kamakwa maka inwe ebe ngosi nka raara nye nchọpụta America. N'otu aka ahụ, n'ọdụ ụgbọ mmiri Palos bụ Muelle de las Carabelas, nwere mmeputa okike nke ndị Columbus weere n'ọkwa ya.
O nwere ike ị maghị na ụmụnne Pinzón a ma ama, ndị so ya, bụ ụmụ amaala obodo a. Maka nke a, n'ụlọ nke okenye n'ime ha, n'ụdị Renaissance, ị nwekwara ebe ngosi nka. Ọ bụ Martín ma nweekwa akpụrụ akpụ n'obodo.
Mana ihe ị nwere ike ileta na Palos akwụsịghị ebe a. Ọ na -adọrọ mmasị nke ukwuu ụlọ ụka St. George, yana n'ụdị Gothic Mudejar na nke nwere frescoes Renaissance na ihe osise nke narị afọ nke XNUMX na -anọchite anya Santa Ana. Na mgbakwunye, ị nwere Fontanilla, obere isi iyi nke nyere mmiri maka ọwa mmiri, na ihe mgbe ochie nke ụlọ Palos.
N'ikpeazụ, na gburugburu ebe obibi ndị mọnk La Rábida ị nwere Ihe Ncheta nke Ndị Nchọpụta, nke a na-enweta site n'okporo ụzọ ejiri ọta mba Ibero-America na ogige ahịhịa osisi José Celestino Mutis chọọ ya mma. N'otu aka ahụ, na Muelle de la Calzadilla, a na -echeta ihe ọzọ Palos hapụrụ: ụgbọ elu nke Plus Ultra, hydroplane nke, na 1926, rutere Buenos Aires.
Almonte, otu n'ime obodo mara mma na Huelva
Anyị na -abanye n'ime ime obodo Huelva iji kwụsị n'obodo a mara mma nke nwere ebe nkiri niile. Iji malite, na mpaghara ime obodo ya bụ Obodo Matalascañas yana akụkụ dị mma nke Doñana National Park. Mana nke kachasị, n'ihi na ọ gụnyekwara obodo ama ama nke El Rocío, ebe ọmarịcha ahịhịa dị, nke ọtụtụ puku ndị njem ala nsọ na -eme njem kwa afọ. Lee, anyị na -ahapụrụ gị akụkọ gbasara obere obodo a.
N'otu aka ahụ, ị ​​nwere ihe ncheta ndị ọzọ nwere mmasị n'ime Almonte. N'ime ha, ndị Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị nke Mwere, ya na ụlọ ụka Mudejar, ụlọ nsọ Santo Cristo na ụlọ Ụlọ Nzukọ Alaeze, wuru na narị afọ nke XNUMX. Okporo ụzọ dị warara gbara ha gburugburu na ụlọ ọcha ọdịnala ha.
Niebla, obodo ọzọ mara mma na Huelva
Mgbidi na nnukwu ụlọ nke Niebla
Anyị abịarute n'otu n'ime obodo mara mma na Huelva, kamakwa otu n'ime ndị ama ama, n'agbanyeghị na ọ bụ ezigbo ihe dị oke ọnụ ahịa. Niebla nwere akụkọ puku afọ. N'ezie, ọ bụ isi obodo nke otu n'ime akpu n'ime nke Caliphate nke Córdoba na, mgbe e mesịrị, ọ ghọrọ taifa nọọrọ onwe ya.
Kariri n'ụba, na ọchịchị obodo ya bụ dolmens nke La Hueca na de Soto, nke na -akpọghachite anyị n'oge Iron Age. Ị nwekwara ike ịhụ n'obodo ahụ ọmarịcha akwa Rome echekwara nke ọma na foduru nke katidral Ndị Kraịst oge mbụ site n'oge Visigoth.
Mana ihe kacha adọrọ mmasị na Niebla bụ nnukwu mkpokọta ha na -etolite Mgbidi ya na nnukwu ụlọ ya site na oge Almoravid. Na n'akụkụ ya, ụka Nuestra Señora de la Granada, nke bụ ụlọ alakụba ochie na ụdị Mudejar Gothic; nnukwu ụlọ Guzmanes na ụlọ ọgwụ nke Nwanyị nwanyị nke ndị mmụọ ozi, ụlọ ọdịbendị ugbu a.
Nlele nke Aracena
Ugbua n'etiti nnukwu ugwu ahụ, anyị na-ahụ obodo mara mma nke Aracena, nke ụlọ ya nwere mgbidi nwere ọcha, gburugburu eke nwere ihe ùgwù na ọtụtụ ihe ncheta. N'ihe gbasara odida obodo, o juru eju Ogige ntụrụndụ eke Sierra de Aracena na Picos de Aroche, ebe, na mgbakwunye, ị nwere ike ịhụ saịtị ihe mgbe ochie nke Cueva de la Mora, Cerro del Tambor na del Castañuelo.
Mana nnukwu ihe ịtụnanya nke Aracena dị n'okpuru obodo ya. Anyị na -ekwu okwu Grotto nke ebube, onye ọnụ ụzọ ya dị n'okporo ụzọ Pozo de la Nieve. Ọ bụ ogige dị n'okpuru ala nke mmiri mebiri na okwute okwute nke Cerro del Castillo. O nwere ogologo ihe karịrị puku mita abụọ, n'agbanyeghị na ị nwere ike ịga naanị ihe dị ka narị na iri na ise. Mana, n'ọnọdụ ọ bụla, ị ga -ahụ ihe ngosi pụrụ iche nke stalactites, stalagmites, aragonites ma ọ bụ coraloids jikọtara ya na ọdọ mmiri.
Mgbe ị nwesịrị ụdị ihe ịtụnanya a, anyị na -adụkwa gị ọdụ ka ị gaa na ihe ncheta Aracena. Anyị ekwuola ihe kacha mkpa nye gị n'ịfefe. Anyị na -ezo aka ụlọ, ebe nchekwa Arab nke narị afọ nke XNUMX echekwara nke ọma.
Ọzọ bụ nke a Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị anyị nke nnukwu ihe mgbu, Ụdị Mudejar, n'agbanyeghị na ụfọdụ ihe dị na ya, dị ka ọnụ ụzọ mbata na ndị ukwe, bụrịrị ndị Gothic oge gara aga. Njirimara ụkpụrụ ụlọ yiri nke ahụ na -egosi ebe obibi nke Santa Catalina Mártir na ụka San Pedro ma ọ bụ San Roque. Mana nke mara mma karịa bụ Chọọchị Santa María de la Asunción, wuru na narị afọ nke XNUMX dị ka akwụkwọ canons nke ụdị Renaissance si dị.
Ihe nketa Aracena anaghị akwụsị ebe a. Maka ihe owuwu ụlọ, anyị na -akwado ka ị hụ ụlọ Ụlọ Nzukọ Alaeze, cha cha Aracenilla, ụlọ ọrụ ugbo San Miguel na, karịa, ọmarịcha ihe. Arias Montano cha cha, ọmarịcha ụdị ụlọ ọgbara ọhụrụ.
Cortegana, ka anyị mechaa njem nlegharị anya anyị na Huelva
Ọ dị nso na Aracena enwere obodo ọzọ nke etinyekwara n'ụzọ ziri ezi n'etiti obodo mara mma na Huelva. Nke a bụ Cortegana ma jikọta ihe nketa dị egwu na gburugburu dị egwu.
Banyere nke mbụ, nnukwu akara ya bụ ụlọ. E wuru ya na narị afọ nke XNUMX wee nwee ebe e wusiri ike, ụlọ mmanya na ebe a na -ere ahịhịa, nke Nuestra Señora de la Piedad. Ugbu a, ụfọdụ ụbọchị ochie akpali nnọọ mmasị.
Ụlọ okpukpe kacha mkpa na Cortegana bụ ụka nke Onye nzọpụta Chineke, nke e wuru na narị afọ nke iri na anọ n'ụdị Mudejar Gothic, n'agbanyeghị agbatịkwu ya nyere ya atụmatụ Renaissance. Na mgbakwunye, n'ime, ị nwere ike ịhụ ọmarịcha ihe Nchịkọta ọla ọcha mexican malite na narị afọ nke XNUMX, ikpo okwu sitere n'otu oge ahụ na ọmarịcha ihe ngere igwe, yana onyonyo okpukpe bara ụba.
Anyị na -adụkwa gị ọdụ ka ị hụ n'obodo Huelva ụka nke san sebastian, nakwa Gothic Mudejar; ụlọ akwụkwọ Calvario na ụlọ nke Ndị otu nnukwu cha cha na ụlọ ihe nkiri Capitol-Sierra.
Na mmechi, anyị emeela gị njem nlegharị anya nke ụfọdụ obodo kacha mara mma na Huelva. Agbanyeghị, na mpaghara dị ka Huelva enwere ọtụtụ obodo ndị ọzọ mara mma. Nke a bụ ikpe, dịka ọmụmaatụ, nke Jabugo, ku n'aka ham nke otu aha; site Almonaster na Real, ya na ụlọ alakụba nke narị afọ nke XNUMX na akwa ya dị egwu nke isi iyi atọ, ma ọ bụ Obodo Sanlúcar de Guadiana, ya na nnukwu ụlọ San Marcos. Ọ bụ na ezughị oke ihe mere ị ga -eji gaa Huelva?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Nduzi » Obodo kacha mara mma na Huelva